Fanontaniana matetika: | fanorana | Ellicott Dredges
Inona no karazana dredge ahitanao?
Izahay dia mitahiry saika ny tsipika vokatra vokarin'ny zotram-pivarotan'i cutter, manomboka amin'ny 8 ”(200 mm) Series 360SL Miompy Dragon® Ny Dredge 8 ″ mankany amin'ny 20 ”(500 mm) Series 2070 Dragon® dredge. Ny dredge lehibe kokoa sy ny singa manokana dia natsangana isaky ny baikon'ny mpanjifa.
Inona ny habetsaky ny dredge tokony hataoko amin'ny asako?
Miankina amin'ny toe-javatra manokana amin'ny tetikasa. Mba fenoy azafady Fikarohana momba ny tetik'asa fikarohana mba hahafahanay mamerina ny antsipiriany momba ny tetik'asa ary hanome fahazoan-dalana feno.
Mety handany solika bebe kokoa ve ny fandefasana dredge iray miaraka amin'ny motera lehibe kokoa?
Tsy voatery. Ny fanjifana solika dia miankina amin'ny famaritana ny fandaharam-pandrenesana, toy ny fahasamihafan'ny fitaovana, ny halaviran'ny paompy ary ny haavon'ny terminal.
Hatraiza ny fahitana ny dredges anao?
Standard Ellicott® andiany dredges manana maotera sy paompy voafantina ho an'ny vokatra mahomby, eo anelanelan'ny 2,625 '(800 m) sy 3,280' (1,000 m).
Ellicott ve manome bozaka Anchor and Car Spud?
Eny. Ellicott dia manome Anchor Booms sy Spud Carriages izay namboarina mba hanafarana. Raha mila fanazavana fanampiny, dia mifandraisa amin'i Ellicott.
Hatraiza ny halalin'ny dredge anao?
Izahay dia manolotra dredge fanapoizinana mikapoka mahazatra miaraka amin'ny fahaizana lalina mandavantaona manomboka amin'ny 20 ft. (6 m) ka hatramin'ny 60 ft. (18.2 m), miankina amin'ny modely dredge. Ho an'ny fampiharana manokana, ny fampitomboana lalina dia azo ampitomboina betsaka.
Aiza no hahitako ny singa fanoloana?
Ellicott dia mihazona famoriam-bola lehibe ny fanoloana fizarana dredge ao amin'ny trano fanamboarana entana ho an'ny fandefasana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Mifandraisa amin'ny departemanta faritra eto aminay amin'ny + 1 410 545 0239 na parts@dredge.com.
Hafiriana no mety hanamboarana dredge?
ny dredges cutterhead standard amidy amin'ny tsenambola, antonony alohan'ny hamidy. Raha tsy misy ny tahiry, ny fanatanterahana ara-dalàna dia 3 ka 4 volana aorian'ny nandraisana baiko. Ny fandefasana ny fitaovana lehibe dia miovaova arak'asa amin'ny asa famokarana.
Afaka mitsidika ny toeram-pambolena ataontsika na ny tetik'asa ve i Ellicott?
Ny mpiandraikitra ny varotra rezionaly dia misy afaka hihaona aminao eo amin'ny tranokalanao na amin'ny biraonay, izay mifanaraka amin'izany.
Fa maninona no tsy misy "lalànan'ny voasarim-bazaha" mba hiarovana ny mpividy kamamo?
Ny "avelao ny mpividy" hitandrina dia tsy fitenenana fotsiny fa ny marina rehefa mividy na manofa dredge. Tsy misy fiarovana, ary ny mpividy dia tsy maintsy miankina amin'ny mpanamboatra dredging. Tsy hahafoy kalitao mihitsy amin'ny vidiny i Ellicott. Maherin'ny 2,200 XNUMX ny dredge marika Ellicott® namboarina tamin'ny farany 125 taona. Ny dredge marika Ellicott® sasany dia mbola manompo manerana an'izao tontolo izao taorian'ny 50+ taona niasana.